ပဲန်နီလေလံ Software များ | စျေးဝယ်ခြင်းတောင်း - RapidAuctionSoft
The newest & most modern Penny Auction Software Solution Available Ask about our 14 တစ်ရက်အခမဲ့အစမ်း
အစိုင်အခဲ timer Rock World Class Support
Video: ပဲန်နီလေလံ Software များ - RapidAuctionSoft
ပဲန်နီလေလံ Software များ
RapidAuctionSoft မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် – Penny Auction and Ecommerce Software Solutions
Thank you for coming to RapidAuctionSoft sellers and designers of ပဲန်နီလေလံ Software များ and the Best PHP Penny Auction Script ရရှိနိုင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုမေးပါ 10% စျေးနှုန်းယှဉ်ပြိုင်ကစားအာမခံ 1-603-557-1563
ယခုကြှနျုပျတို့တစ်စက်ပို့ဆောင်သူပေါင်းစည်းမှုပူဇော်နိုင်ကြသည်, သင်တစ်ဦးပြည့်စုံ turnkey စစ်ဆင်ရေးကမ်းလှမ်းရန်!!!
က bug တွေရှိပါသလား?
သင့်ရဲ့ SEO ဆိုသည်မှာအလုပ်လုပ်ကိုင်မဟုတ်ပါ? ကဖော်ရွေမိုဘိုင်းသည်မဟုတ်?
နယူး Update ကို – ပိုကောင်းတဲ့ထောင့်ပုံရိပ်တွေလည်းပါဝင်သည် (ကနေရှေးခယျြ3စတိုင်များနှင့် 8 အရောင်များ, အားလုံးဒိုင်းနမစ်စာသားကိုယခုဘာသာစကားထောက်ခံနေသည် အဖြစ်ကောင်းစွာ), RSS ကို, RSS ကို + Atom feeds တွေကို, လေလံနှင့် CMS အကြောင်းအရာနှင့်မြောက်မြားစွာသည်အခြားအပြောင်းအလဲများများအတွက်ပြဇယား!!!
ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်သင်၏ပဲန်နီလေလံဝက်ဘ်ဆိုက်အတွေးအခေါ်များကိုဆွေးနွေးရန်မျှော်လင့်. တိုင်း client ကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးများရှိပြီးကျွန်တော်ထုံးစံလေလံ Code ကိုရေးသားခြင်းကိုခံစား, ဘာမျှမသည်ငါတို့အဘို့ရှုပ်ထွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များစိတ်ကူးများအပေါငျးတို့သအကြောင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားရ, တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ရဲ့အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်…ငါတို့သည်သင်တို့၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုအတွက်ဝေမျှဖို့ကိုချစ်
အချိန်မရွေးကျွန်တော်တို့ကို Call, ကျနော်တို့ရေခြားမြေခြားကုမ္ပဏီများနှင့်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်အလုပ်မလုပ်
ဒါကြောင့်သင်တစ်ဦးက e-Commerce သို့မဟုတ်ပဲန်နီလေလံဆော့ဝဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုအလေးအနက်များမှာ?
သင်သည်သင်၏သုတသေနပွုနှင့်အခြား e-commerce ပလက်ဖောင်းအကြောင်းကိုမကောင်းတဲ့ပုံပြင်များစကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ, ပြီးဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့အရင်းအမြစ်မှဝယ်ယူစိုးရိမ်ပူပန်နေကြသည်. ကောင်းပြီငါတို့သည်သင်တို့၏နောက်ကျောရှိ. အခမဲ့အဆင့်မြှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးကြောင်းကိုတစ်ဦးကအာမခံခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်နေမြင်ကြပြီသောအရှည်ဆုံးရုံးတင်စစ်ဆေးကာလနှင့်အတူ. ထိုသို့ကြိုးစားပါ 14 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆာဗာတစ်ခုပေါ်တွင်အခမဲ့ရက်ပေါင်းအန္တရာယ်…သငျသညျအဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အခါနှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဆာဗာလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့, သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်ခင်းဧည်ဖြေရှင်းချက် pof တဦးတည်းကိုရှေးခယျြ
ကန့်သတ်အချိန်ငါတို့သည်များအတွက်အာကာသရှိသည်3beta ကိုစမ်းသပ်က်ဘ်ဆိုက်များ….ဤ3လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့ကြောင်းကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့စမ်းသပ်တာဝန်သိအသက်အဘို့အခမဲ့အဲဒီမှာ software ကိုရကြလိမ့်မည်…ထုံးစံဒီဇိုင်းသို့မဟုတ် programming ကိုဖယ်ထုတ်ပြီး. မှ beta ကိုစမ်းသပ်ခြင်းကိုရည်မှတ်အီးမေးလ်များကိုပေးပို့ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ development team
သင်တစ်ဦးပဲန်နီလေလံ Software များဖြေရှင်းနည်းလိုအပ်ပါသလား, ပဲန်နီလေလံ Script Solutions ဒါမှမဟုတ် E-commerce ဖြေရှင်းချက်
အကောင်းဆုံးပဲန်နီလေလံ Software များ, ရရှိနိုင်ပဲန်နီလေလံ Script ဖြေရှင်းချက်
တွင် 2018 ငါတို့သည်နောက်ခေတ်သစ်မူဘောင်လျှင်ပဲန်နီလေလံ Software များနှင့် E-commerce ကိုဆော့ဖ်ဝဲအများအပြားကိုရောင်းသူခေတ်မမီတော့တဲ့နည်းပညာတွေနဲ့နည်းနည်းသုံးပြီးခဲ့ကြသည်သတိပြုမိ. ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ရေးသားခြင်းစတင်ခဲ့သည်, ငါတို့သည်ငါတို့၏ PHP ကိုများအတွက် CodeIgniter သုံးပြီးမြေပြင်ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုဒ်တက်ရေးသားခဲ့သည်. CodeIgniter ခေတ်မီ MVC Framework ကိုဖြစ်ပါတယ် (ပုံစံ, ကြည့်ရှုခြင်း, controller ကို), ဒါကြောင့်လိုအပ်မယ့်ဘယ်မှာမှယုတ္တိဗေဒခွဲခြားထားတဲ့, များအတွက်သင်ယူနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စူပါလွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, ပုံမှန် PHP ကိုထက်ပိုမြန်, ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ပိုပြီးအနာဂတ်အထောက်အထား.
သို့သော်မလုံလောကျခဲ့, ငါတို့သည်လည်းသူတို့ AJAX ကိုတိုင်မားအပေါ်သို့အားကိုးကြောင့်အကြောင်းပြချက်အဘယ်ကြောင့်ဆာဗာများပျက်ကွက်ပါဆုံးကတော့ PHP သာပဲန်နီလေလံ Software များကြောင်းကိုသဘောပေါက်, လေလံနဲ့ messaging. ဒီတော့ Socket.io နှင့် Node.JS ဤသူအပေါင်းတို့ကိုပြောင်းရွှေ့. ဆာဗာကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အချက်အလက်အသစ်ကိုတောင်းဆိုရန် client ကိုမလိုအပ်အတူ client ကိုတိုက်ရိုက်မက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့နိုင်သောအဓိပ္ပာယ်. ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်မားအမှန်တကယ်တစ်စက္ကန့်များ၏ 1000th ရဲ့လေလံကိုခြေရာခံ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေလံပိုမိုမြန်ဆန်ကြောင်းအဓိပ္ပာယ်, သည်အခြားဖြေရှင်းနည်းများထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်နှင့်ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသော. တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦးကိုဆုံးရှုံးနောက်ဆုံးစက္ကန့်လေလံအကြောင်းကိုဝေဖန်ပြောဆိုစိတ်မပူပါနဲ့. ကျွန်ုပ်တို့၏လေလံပိုပြီးတိကျစွာတခြားဆိုက်များထက်ခြေရာခံနေသည်. မျိုးစုံအသုံးပြုသူများကိုတစ်ချိန်တည်းမှာလေလံဆွဲလျှင်သင်စာသားအတူတူဒုတိယအတွင်းအမြင့်ဆုံးလေလံပြောင်းလဲမှုမြင်နိုင်ပါသည်.
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့အများဆုံးအလားအလာ clients များလွယ်ကူသောလစဉ်ငွေပေးချေမှုအတွက် hosting နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်ပေးဆောင်ပိုအဆင်ပြေဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်, ယုံကြည်စိတ်ချရသောဝန်မျှမျှတတ server များပေါ်တွင်, ကမ်ဘာပျေါမှာအကောင်းဆုံးဆာဗာကိုကုမ္ပဏီများတဦးတည်းအားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေး! ဒါကြောင့်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အရာခပ်သိမ်းကိုကိုင်တွယ်. သင်တစ်ဦးဘုံ server ကို outgrow အကယ်., လိုအပ်ချက်ရှိလျှင်ပြီးတော့ကျနော်တို့နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဆာဗာကိုသင်ရွှေ့မည်နိုင်ပါတယ်. ဒါပေမယ့်သင်ဆဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗားရှင်းထိန်းချုပ်ဆော့ဖျဝဲ၏အကျိုးကျေးဇူးများအပေါငျးတို့သရပါလိမ့်မယ်.
အားလုံးအသစ်က client များအခမဲ့တပ်ဆင်ခံယူတဲ့လူအပေါင်းတို့ကန့်သတ်အချိန်များအတွက်,5သင်တန်းနာရီနှင့်5အခမဲ့ဒီဇိုင်းနာရီ.
ကျနော်တို့ရုံပဲန်နီလေလံ Solutions ထက်ပိုမိုပူဇော်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးဝယ်လှည်း plugin ကိုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုမေးပါ.
အစိုင်အခဲတိုင်မား Rock, တစ်စက္ကန့်များ၏ထောင်အတွက်ခြေရာခံ. ကရရှိနိုင်ပါအရှိဆုံးတိကျမှန်ကန်လေလံစနစ်က Making.
သင်မဝယ်မီစမ်းကြည့်ပါ. အခမဲ့2ရက်သတ္တပတ်ရုံးတင်စစ်ဆေး.
လက်ရှိ Clone ပါဝင်သည်
ငါတို့သည်လည်းရှိ 25 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များအားလုံးမှလျှောက်ထားနိုင်ပဲန်နီလေလံဆော့ဝဲ themes များ, သင့်ရဲ့ပဲန်နီလေလံဆော့ဝဲများအတွက်ဒီဇိုင်းအတွက် သာ. ကြီးမြတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အဓိပ္ပာယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ရိုက်ပို့လိုက်ကြတယ်ထုတ်စစ်ဆေး ကျွန်တော်တို့ရဲ့သရုပ်ပြ site ပေါ်တွင်!!!
login အသုံးပြုသူများအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခြင်း၏များစွာသောအားသာချက်များကိုမြှင့်တင်နိုင် – ၎င်းတို့၏ Account စာမျက်နှာကို log in, တစ်ဦးလေလံနေရာ, သူတို့ရဲ့အကောင့်ရန်ပုံငွေများ add နှင့်ပိုပြီးအများအပြားလုပ်ဆောင်ချက်များကို.
ခရက်ဒစ်ဝယ်ယူရန် / Balance အသုံးပြုသူများအကြွေးဝယ်ယူနှင့်သူတို့၏အကောင့်တစ်ခုခုကိုငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်မှတဆင့်ချိန်ခွင်လျှာ add နိုင်ပါတယ် Add, ကမ်း, တစ်ဦးလေလံအားမရမတိုင်မီသို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်သိုက်.
စျေးပြိုင်အဆိုပြုလွှာအသုံးပြုသူများထုတ်ကုန်ကိုရွေးချယ်ကာလေလံထားပါနိုင်ပါတယ်ထားပါ. သူတို့အနိုင်ရသည်အထိသူတို့ဆန္ဒရှိအဖြစ်အသုံးပြုသူအဖြစ်အများအပြားလေလံထားပါနိုင်ပါတယ်. သူတို့ကအစတစ်ခုတည်းလေလံနေရာသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏လေလံကယ်တင်အလိုအလျောက်သူတို့၏ကိုယ်စားလေလံဆွဲရန် Bidbutler ကိုသုံးနိုင်သည်ဖြစ်စေ.
Bidbutler Bidbutler, ထို့အပြင် autobid သို့မဟုတ်မာစတာလေလံကိုခေါ်, စနစ်အလိုအလျှောက်သင့်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသို့လေလံတိုင်းတဆယ်စက္ကန့်နေရာသည်အဘယ်မှာရှိ, သို့မဟုတ်ကိုမဆိုကြားကာလကိုသင်သတ်မှတ်.
SMS ကိုစျေးပြိုင်အဆိုပြုလွှာကိုသင်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပြီးတစ်ဦးကို SMS လေလံအတွက် log ပါဘူး. အဆိုပါ SMS ကိုလေလံအချက်အလက်များဆက်စပ်လေလံပွဲတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်နှင့် site ၏စီမံအုပ်ချုပ်သူကသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်.
အချိန်ကိုသုညစက္ကန့်ရောက်ရှိသည့်အခါအနိုင်ရလေလံပွဲ၏ဆုရှင်တစ်ဦးလေလံနေရာပြီးခဲ့သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါဆုရှင်လေလံပွဲကို item များအတွက်နောက်ဆုံးစျေးနှုန်းချေ (အမှန်တကယ်စျေးနှုန်းထက်နိမ့်ဖြစ်လတံ့သော).
လေလံအမျိုးအစားများလေလံများစွာသောအမျိုးအစားများကိုဈေးကွက်ထဲမှာရှိပါတယ်; သို့သော်, လူကြိုက်အများဆုံးအမျိုးအစားများကိုပုံမှန်လေလံများမှာ, Fixed စျေးနှုန်းလေလံ, Nilbitter လေလံ, အခမဲ့လေလံနှင့်လူသစ်လေလံ.
CMS သို့အဆိုပါအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အ (CMS သို့), သင်သည်သင်၏လေလံ site ကိုများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဖော်ရွေစာမကျြနှာကိုဖနျတီးပေးနိုငျသည်အဘယ်မှာရှိ – ထိုကဲ့သို့သောကြှနျုပျတို့အကွောငျးအဖြစ်, ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ, ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ & အခြေအနေများ, မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများရဲ့, ကူညီပါ, ဘယ်လိုဒါထွက်အလုပ်လုပ်နှင့်.
လက်ရှိစျေးပြိုင်လေလံစာရင်း – ဒီနေရာတွင်သင်၏ Live / လက်ရှိလေလံရဲ့လေလံသတင်းအချက်အလက်များကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်.
ဝမ်လေလံစာရင်း – ဒီကနေသင်တို့ကိုအနိုင်ရခဲ့လေလံသင့်ရဲ့စာရင်းကိုကြည့်ရှုနောက်ဆုံးစျေးနှုန်းပေးချေနိုင်ပါတယ်.
လေလံသမိုင်းမော်ကွန်းတိုက် – အသုံးပြုသူများသည်ဤအရပ်မှ၎င်းတို့၏လေလံ archive ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်.
Add တွေ့ (လေလံ Pack ကိုဝယ်ယူရန်) – အသုံးပြုသူများသည်ဤအပိုင်းကနေလေလံနေရာနိုင်ရန်အတွက်လက်ကျန်ငွေထည့်နိုင်သည်.
ငွေပေးချေစနစ် – အသုံးပြုသူများသည်မည်သည့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်, အားလုံးအလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသော, နှင့်လေလံပွဲရဲ့နောက်ဆုံးစျေးနှုန်းပေးချေ. PayPal ကကို default ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်ဖြစ်ပါသည်.
ငွေသွင်းငွေထုတ်သမိုင်း – အသုံးပြုသူများသည်ဤအပိုင်းကနေအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ငွေပေးငွေယူလှုပ်ရှားမှုများကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်.
Code ကိုရွေးနှုတ်တော်မူ – အသုံးပြုသူများ site ကိုမြှင့်တင်ရေးတဲ့ပုံစံအဖြစ်ဖြင့် admin ရဲ့ထောက်ပံ့ပေးကြသည်ကိုအထူးကမ်းလှမ်းမှု codes တွေကိုရွေးနှုတ်တော်မူနိုင်ပါတယ်.
မိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုရည်ညွှန်း – သူတို့ဆန္ဒရှိအဖြစ်အသုံးပြုသူများအဖြစ်များစွာသောအဆွေခင်ပွန်းရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်. တိုင်းလွှဲပြောင်းဘို့သူတို့ကိုလည်းအားဖြင့် admin ရဲ့ set ဆုကြေးငွေခရက်ဒစ်ရရှိနိုငျ.
စကားဝှက်ကိုပြောင်းရန် – အသုံးပြုသူများသည်ဤအရပ်မှ၎င်းတို့၏အကောင့် password ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်.
ပိတ်ထားသောအကောင့် – အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ account ကိုပိတ်ဖို့နိုင်ပြီးသူတို့ထပ်တူညီအီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အကောင့်ဖွင့်လို့မရဘူး.
သတင်းလွှာပြင်ဆင်မှုအား – အသုံးပြုသူများသည်ဤအပိုင်းကနေသတင်းလွှာကြေးပေးသွင်း option ကို enable သို့မဟုတ် disable နိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ.
သတင်းလွှာလာရောက်လည်ပတ်သူများအသိပေးချက်များကိုလက်ခံရရှိရန်လေလံပွဲသတင်းလွှာများအတွက် sign up ကိုလို့ရပါတယ် Subscribe, နှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများ.
Category: စီမံခန့်ခွဲမှုအ admin ရဲ့စီမံခန့်ခွဲနိုင်တယ် (ပေါင်း, တည်းဖြတ်သို့မဟုတ် delete) အမျိုးအစားနှင့်အမျိုးအစားအဘို့ဖြစ်စေအမည်သို့မဟုတ် ID အနေဖြင့်ရှာဖွေ.
လေလံစီမံခန့်ခွဲမှုအဒ်မင် add နိုင်ပါတယ်, နာမတော်ဖြင့်ပြင်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်လေလံပယ်ဖျက်ပြီးထိုသူတို့အဘို့ရှာဖွေ, အဆင့်အတန်း, အမျိုးအစားနှင့် ID ကို. အဆိုပါစီမံအုပ်ချုပ်သူလည်းအတူတူပင်လေလံ copy အဖြစ်ကသမိုင်းများနှင့်အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလေလံရဲ့သို့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်.
လေလံအစီရင်ခံစာ / Delivery အဒ်မင်အနိုင်ရလေလံ၏အစီရင်ခံစာဒါမှမဟုတ်ဆုရှင်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်. အဆိုပါစီမံအုပ်ချုပ်သူဤအပိုင်းကိုထံမှပေးပို့ဖို့လေလံပွဲရဲ့ဆိုင်းငံ့ status ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်.
အဆိုပါ admin ရဲ့ချိန်ညှိခြင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ဤအပိုင်းကနေ site ကို setting များကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်.
အဖွဲ့ဝင်စီမံခန့်ခွဲမှုအ admin ရဲ့ add နိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ, အသုံးပြုသူများသည်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အဆင့်အတန်းများအတွက်ရှာဖွေရေးပြင်ဆင်ရန်သို့မဟုတ် delete, အမည်နှင့် ID ကို. အဆိုပါစီမံအုပ်ချုပ်သူလည်းအသုံးပြုသူများကို '' လေလံတွေ့နိုင်ပါသည် & ငွေသွင်းငွေထုတ်မှတ်တမ်း.
CMS သို့အဆိုပါ admin ရဲ့ add နိုင်ပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောအကူအညီအဖြစ်ဆိုက်အကြောင်းအရာမဆိုတည်းဖြတ်သို့မဟုတ် delete, အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ, ဒါကြောင့်အပေါ်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီများနှင့်.
အဆိုပါ admin ရဲ့ချိန်ညှိခြင်းအီးမေးလ်ပို့ရန်ဤအပိုင်းကနေအီးမေးလ် setting ကိုရှေးခယျြနိုငျ – အီးမေးလ်ကိုသက်ဝင်, စကားဝှက်ကိုစသည်တို့ကိုမေ့.
ဆုရှင်စီမံခန့်ခွဲမှုအ admin ရဲ့သူတို့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုနှင့်အတူဆုရသူစာရင်းကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်, လိပ်စာ, နှင့်၎င်းတို့၏တုံ့ပြန်မှု.
ဆိုက်ကိုစာရင်းအင်းအဆိုပါ admin ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့အစီရင်ခံစာကြည့်ရှု CSV ပုံစံအတွက်အစီရင်ခံစာတင်ပို့နိုင်ပါတယ်.
အချိန်ဇုန်အဆိုပါ admin ရဲ့ချိန်ညှိခြင်းဤအပိုင်းကနေသူ့နိုင်ငံရဲ့အချိန်ဇုန် setting ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်.
အထူးကမ်းလှမ်းချက် / မြှင့်တင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု
အချိန်အဆိုပါ admin ရဲ့ကသူတို့ရဲ့ website သို့မြှင့်တင်ပေးရန်အထူးကမ်းလှမ်းချက်များနှင့်ဆုကြေးငွေသတ်မှတ်နိုင်သည်. အပိုဆု codes တွေကိုစုတခုအချိန်ကန့်သတ်ရလိမ့်မည်.
အဆိုပါ admin ရဲ့ချိန်ညှိခြင်းအပိုဆုဆိုင်းအပ်ခြင်းနှင့်လွှဲပြောင်းဆုကြေးငွေသတ်မှတ်နိုင်သည်.
လေလံ Pack ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအ admin ရဲ့အခမဲ့အကြွေးနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောလေလံအထုပ်သတ်မှတ်နိုင်သည်. အဆိုပါ admin ရဲ့ add နိုင်ပါတယ်, တစ်ဦးချင်းစီ Bid Pack ကိုတည်းဖြတ်သို့မဟုတ် delete.
အကူအညီ / မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများစီမံခန့်ခွဲမှုဖော်ပြချက်များနှင့်အတူအကူအညီနှင့်မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများစာမျက်နှာများကိုဖန်တီးပါ.
IP ကို ​​Block ကိုအဆိုပါ admin ရဲ့နောက်ထပ်က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ခွင့်များအတွက်မဆို IP ကို ​​block နိုင်ပါတယ်.
အဆိုပါ admin ရဲ့ဒီကနေသူတို့ရဲ့အကောင့် password ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည် Password ကိုပြောင်းလဲပါ.
အော်တို relist နှင့်အလိုအလျောက်စာရင်းလေလံ
Facebook သို့မဟုတ်တွစ်တာနှင့်အတူ Login
မြောက်မြားစွာ addons / plugins ကိုနှင့် optiona features တွေ
နယူး Dropship addon Doba နှင့် MegaGoods များအတွက်ထောက်ခံမှုရှိပါတယ်, လာမယ့်ရက်အနည်းငယ်ကျော်ကဆက်ပြောသည်ခံရဖို့ကပို dropshippers. တက် Get နှင့်အနည်းငယ်ရိုးရှင်းသောကလစ်အတွက်စတိုးဆိုင်နှင့်အတူအပြေး
မိတ်ဆက်ခြင်း Advertising ကြော်ငြာ
အခုတော့လွယ်လွယ်ကူကူလေလံမြှင့်တင်ရန်ကြော်ငြာတွေဖန်တီး, ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်စာမျက်နှာများ, ခွင့်ပြုတတိယပါတီကြော်ငြာရှင်များမှတစ်ဆင့်နှင့်ပင် colect လစဉ်ဝင်ငွေ. ဒါက paid အဆင့်မြှင့်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုလည်းသင့်ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာ website ရဲ့ backlink ပေးသုံးနိုငျအဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပိုင်ရှင်အဖြစ်သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှု imporve လိမ့်မည်ဟု ne ဖြစ်ပါသည်. အသုံးပြုရလွယ်ကူတယ်, easy t […]
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှ theme မိတ်ဆက်ခြင်း 20+ တင်းပလိတ်များ, ခွဲ template ကို combo…နီးပါးနှင့်အတူ 30 themes များနှင့်ကြီးထွားလာ…သငျသညျယခုကျော်ဖန်တီးနိုင် 500+ လုံးဝထူးခြားသောဒီဇိုင်းများ. အားလပ်ရက်အပေါ်မှာအခြေခံအများအပြား
မကောင်းပါပဲန်နီလေလံဆော့ဝဲအတူ flyer ခံစားရတယ်, ပဲန်နီလေလံ Script သို့မဟုတ်ပဲန်နီလေလံဒီဇိုင်း
သငျသညျခံစားမိလျှင်သင်၏အားသာချက်ယူသို့မဟုတ်သင့် client software များနှင့်အတူမပျော်များမှာခဲ့ကြသော်လည်းအဖြစ်ငါတို့သည်သင်တို့၏ရှိရင်းစွဲအချက်အလက်များနှင့်ဒီဇိုင်းအားလုံး ယူ. သင်သည်သင်၏ဆော့ဖ်ဝဲကိုပံ့ပိုးပေးပြောင်းလဲဆုံးဖြတ်သည့်အခါမျှမကျချိန်အဓိပ်ပာယျကျွန်တော်တို့ရဲ့ system ကိုစ imporrt နိုင်ပါတယ်. Many of our competitors are known for abandoning their clients and […]
dynamic ဘာသာစကားများပံ့ပိုးမှု, သင့်ရဲ့ site ကိုပိုပြီးလူတွေကိုရောက်ရှိပါစေ
ပဲန်နီလေလံအသစ် Addon, စျေးဝယ်ခြင်းနှင့် POS ကုဒ်…auto translate content from the admins default language to all languages they have enabled in their program (POS, စျေးဝယ်သို့မဟုတ်လေလံ…BTW ယခုနှစ်အကုန်တွင်လာမယ့် eBay လေလံ). ဤသည် addon အခုအချိန်မှာထုတ်ကုန်များနှင့် meta tag များအဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဘာသာပြန်ချက် API အတွက်တစ်ဦးမှာ google account ကိုလိုအပ်တယ်. […]